Linux Mint yave kuda kumanikidza kugadzirisa kune vashandisi | Kubva kuLinux
Mushure mekusunungurwa kweLinux Mint 20 Ulyana pakati pegore rapfuura, isu tave ku Linux Mint 20.1 Ulyssa, iyo inowanikwa kubvira kutanga kwegore(mavhiki mashoma apfuura) uye timu yekusimudzira yatotaura nezvenhau dzeiyo inotevera vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu iyo yavanotaura dzimwe shanduko dzine chekuita nekuvandudzwa.
Kunyanya, Clem akasara (tungamira anovandudza chirongwa) yakasimudza mukana wekumisikidza imwe nzira kana imwe kuiswa kwevashandisi, kunyangwe hazvo akataura kuti ivo vari kutoshanda kutsvaga formula iyo inouraya shiri mbiri nedombo rimwe: isa zvidzoreso uye pamusoro pezvose, usatsamwisa vashandisi, nekuti mamiriro acho haana kusiyana nezvinoitika semuenzaniso neWindows.
Kutora muenzaniso weiyo shanduko kuvaka 10240 ye Windows 10, Microsoft yakatora mutemo mutsva wekuvandudza uye shanduko muhurongwa hwekushandisa: mangoti chiitiko chitsva chikaedzwa nekunatswa, kuiswa kwacho kwakaitwa pazvishandiso zvevashandisi kuburikidza neWindows. Gadziridza mushure mekuyedza ficha nyowani.
Kana vebhizinesi kana vashandisi vehunyanzvi (kusvika padanho) vaigona kudzora kutumirwa kwekuvandudzwa, ivo vaisungirwa zvishandiso mukati Windows 10 Kumba.
Mune iyo blog posvo, govera zvinotevera
“Takatanga basa rekuvandudza manijaja wekuvandudza. Mukusunungurwa kunotevera, hazvizongotarisa chete kuti zviripo here, asi zvakare zvichazoteedzera metric uye zvichikwanisa kuona makesi panoshayikwa zvinyorwa. Mimwe yemiparamende iyi izuva rekugadziriswa kwekupedzisira, zuva rekugadziriswa kwekupedzisira kwemapakeji muhurongwa, huwandu hwemazuva panguva iyo imwe vhezheni yakaburitswa ...
Mune zvimwe zviitiko, maneja wekuvandudza anogona kukuyeuchidza iwe kuti ushandise zvidzoreso. Mune zvimwe zviitiko, iwe unogona kutosimbirira. Asi isu hatidi kuti zvipinde munzira yako. Aripo kuti akubatsire. Kana iwe ukabata zvinhu nenzira yako, iwe uchaona smart mapatani uye mashandisiro. Ichave zvakare inogadzirisika uye ichizokutendera iwe kuti uchinje nzira iyo yakagadzirirwa.
Tine nheyo dzakakosha muLinux Mint. Imwe yacho ndeyekuti ikombuta yako, kwete yedu. Isu tinewo akawanda kesi dzekushandisa mupfungwa uye hatidi Linux Mint kuti ive yakaoma kushandisa kune chero ipi zvayo.
Tichiri kuronga uye kusarudza iyo uye sei maneja anodikanwa kuti awedzere kuoneka, saka zvakanyanyisa kukurumidza kutaura nezve izvi zvinhu uye kupinda mune izvo zvinyorwa zvingangofarira iwe pano. Parizvino, takaita kuyedza kuti maneja ave akangwara uye nekumupa rumwe ruzivo uye metric kuti aongorore. «
Musimboti wechinyorwa yaive yekuti huwandu hwakawanda hweLinux Mint zvishandiso zvaive zvichishandiswa zvechinyakare zvinoshandiswa, mapakeji, kana kunyangwe yechinyakare vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu uye izvi zvatova zvinotyisa kune vanogadzira Linux Mint, seyakawanda nhamba yemidziyo inomhanya paLinux Mint 17.x, (vhezheni yeLinux Mint yakapedza rutsigiro muna Kubvumbi 2019.) sekuburitswa kweBlog.
Izvi zvinoratidzira marongero anoita timu kudzikamisa vashandisi veLinux Mint kusada kugadzirisa, uye timu yeLinux Mint inoenderera ichichengeta zviyeuchidzo zvevashandisi kuchengetedza masisitimu avo ekushandisa kusvika pari zvino:
"Zvekuchengetedza zvigadziriso zvinogadzirisa kushomeka pakombuta yako. Ivo vanokudzivirira pakurwiswa kwenzvimbo (vanhu vane mukana wekupinda mukomputa yako uye nevaya vane account pairi) asiwo nekurwiswa kure (varwisi vanovavarira komputa yako kuburikidza neInternet kubatana).
Pamusoro pekurwiswa kwakanangwa, zvigadziriso zvekuchengetedza zvakare zvinokudzivirira kubva kune malware. Kana iwe ukakumbira komputa yako kuti ibudise zvemukati zvemukati (software yawakadhawunirodha, zvinyorwa zveemail, chinongedzo chaunodzvanya, kana kunyangwe peji rewebhu raunoshanyira muwebhusaiti yako), iwe unomhanyisawo njodzi yekuvhura musuwo pakombuta yako uye kukoka varwisi kupinda.
Kana kunetsekana kukawanikwa, vanogadzira vanokugadzirisa nekukurumidza uye zvinogoverwa vanozvitumira seyekuvandudza kuitira kuti ugone kuzvishandisa nenzira yakakodzera. Uku kunetseka kunozoitwa pachena uye kuzivikanwa kune vanogona kurwisa. Izvi zvinoreva kuti yechinyakare sisitimu haisi yekungovhunduka chete, inozivikanwa kunge iri panjodzi. »
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Linux Mint yave kuda kumanikidza kugadzirisa pane vashandisi
Mune iyo posvo yandakangoverenga (tsamba yacho) vanojekesa kuti ichave inogadziriswa, saka simba iri musoro wenhema.
Ini ndinomanikidzwa kuenderera ndichishandisa Mint 18.3 sezvo iriyo yega vhezheni iyo inondibvumidza kushandisa GNU / Linux pamashini angu ekare sezvo vachishandisa kadhi yevhidhiyo yeNvidia uye chero distro yakaburitswa mushure meLinux Mint 19 haishande nekuti ini ndine iro bhodhi reamai. vhidhiyo, kunyangwe kana ndichida, ini handigone kumutsiridza iyo system, ini ndinongonamata kuti pandinomanikidza kugadzirisa, hazvishande sezvakaita muWindows, ndakaedza akati wandei uye yega sisitimu inondishandira pamachini angu iLinux Mint 18.3, ndinotarisira kuti havabvise iyo zvakare mhinduro inondishandira.
Pindura kuna ArcanHell
Zvakanaka, Mint 18.3 ine rutsigiro kusvika pakupera kwaApril, saka hazvichakurudzirwe kuti uishandise nekuti hauzove nerutsigiro rwekuvandudza uye zvichingodaro ...
Zvichida kana iwe ukapinda mumusangano wepamutemo uye wotaura nyaya yako vanogona kukubatsira iwe kuisa zvimwe zvazvino vhezheni….
Havana kumbotaura zvekumanikidza !!!! zvakaipa zvakashata muridzi. Ndokumbira utumire izvo chaizvo zviri kutaurwa nezvazvo mugwaro remwedzi nemwedzi.
Pindura kuna Janus
SUNGIRA DNS ikozvino ine yekuedza DNS rutsigiro pamusoro peHTTPS